मिलन जी नाटक हैन फिल्म राम्रो बनाउने की ! ३ पैसाको मासुलाई १२ पैसाको मसला किन ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
मिलन जी नाटक हैन फिल्म राम्रो बनाउने की !
३ पैसाको मासुलाई १२ पैसाको मसला किन ?
समीर बलामी/फिल्मी फण्डा । अन्य क्षेत्रमा जस्तै फिल्म क्षेत्रमा पनि इगो हटका कारण अनेक किसिमका प्रतिस्पर्धाहरु हुने गर्छन् । कलाकारको कलाकारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गर्छन् भने निर्देशक/निर्माताको निर्देशक निर्माताको साथै कलाकारहरु समक्ष सम्म प्रतिस्पर्धा हुने गर्छन् । केही समय अघि मात्र गोविन्द शाहीले फिल्म लभ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेर फ्लोरमा निस्केका थिए । नायक प्रदिप खड्कालाई च्यापेर गोविन्द आफ्नो फिल्मको सुटिङको लागि सिक्किममा व्यस्त छन् ।
यता मिलन चाम्सले त्यहि टिमलाई देखाउन फिल्म बिर विक्रम २ को तामझाम सहित औपचारिक घोषणा गरेका छन् । फिल्म लिलिबिल्ली बाट प्रदिप खड्का र गोविन्द शाही एकातिर भने सुदिप खड्का र मिलन चाम्स अर्कोतिर छुटिएका हुन् । त्यसपछि दुबै टिमको दुईतिर प्रतिस्पर्धामा फिल्म घोषणा र सुटिङमा जाने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यसकै प्रतिस्पर्धाको रुपमा बिर विक्रम २ को तामझाम सहितको घोषणा कार्यक्रम हो की भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।
कस्तो थियो तामझाम
फिल्म बिर विक्रम २ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमको तामझाम हेर्दा मिलन चाम्सको भद्दा नाटक जस्तो लाग्थ्यो । फिल्ममा कलाकारहरु को–को रहने त भन्ने विषयमा उद्घोषक नरेश भट्टराईले बोल्दै गर्दा शुरुमा याकलाई स्टेजमा धुमधामसँग व्याण्ड बाजा सहित भित्राएका थिए । त्यस लगतै फिल्मको कलाकारहरुमा बर्षा शिवाकोटीलाई राजकुमारी भन्दै व्याण्डको धुनसँगै भित्राईन् । त्यति मात्र हैन नायक आकाश श्रेष्ठलाई पनि राजकुमार भन्दै ब्याण्डकै धुन सहित भित्राएका थिए ।
यतिसम्म हुदाँ संचारकर्मी तथा उपस्थित अन्य शुभचिन्तकहरु हाँसिरहेका थिए । त्यस लगतै फेरि नाजिर हुसेनलाई पनि अर्को राजकुमार भन्दै व्याण्डकै धुन सहित स्टेजमा उतारिए । यति सम्महुदाँ केही संचारकर्मीहरु कार्यक्रम हलभन्दा बाहिर गईसकेका थिए । कतिपयले त्यहिँ कानेखुशी गर्न लागे । मिलन चाम्सको कस्तो सस्तो नाटक पब्लिसिटीको लागि ? कतिले त ढंग नपुगेको नाटकको पनि संज्ञा दिए ।
बास्तवमै सोही तरिकाले सबै कलाकार र टेक्निसियन टिमलाई एकै पटकमा स्टेजमा उतारिएको भए के हुन्थ्यो । तर बार बार त्यहि कुरा लाजमर्दो तरिकाले दोहो¥याईरहेका थिए त्यहाँ । ३ पैसाको मासुलाई १२ पैसाको मसला भन्ने जस्तै लाग्थ्यो बिर विक्रम २ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रम । मिलन चाम्सले यतातिर ध्यान नदिई राम्रो फिल्म बनाउनतिर ध्यान दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो की ?
यस अघि पनि मिलन चाम्सले लिलिबिल्लीमा प्रदिप खड्कालाई ४ बडिगार्ड सहित भित्राएका कारण विवादमा तानिएका थिए । यसै त मिलन चाम्सको व्यवसायिक रुपमा सफल फिल्म भनेकै अहिले सम्म बिर विक्रम मात्र हो । विषयवस्तुको आधारमा बोबी राम्रो चलेको हो । लिलिबिल्ली औसत फिल्म हो । बिर विक्रमले नै मिलन चाम्सलाई निर्देशकको थप उचाई दिएको थियो । पुनः बिर विक्रम २ लाई हिट बनाउनतिर बढि ध्यान केन्द्रित गर्ने मिलन जी ?